အကောင်းဆုံးလက်ဆောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Oct 17, 2012 in Copy/Paste |5comments
ဒီမေးခွန်းကို ကျွန်မသဘောကျလို့ ကျွန်မနဲ့သိတဲ့ လူအချို့ကိုလည်း မေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဖြေတွေအများကြီးထဲက တစ်ချို့အဖြေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေတယ်။ ဥပမာ “သစ္စာ၊ ချီးကျူးစကား၊ ဂတိ၊ အကြင်နာ၊ ဗဟုသုတ၊ လေးစားမှု၊ ခွင့်လွတ်မှု၊ အချစ်၊ ဂရုစိုက်မှု…. ” စတာတွေဖြစ်တယ်။ အဖြေတွေထဲက ကျွန်မကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး ဖြေခဲ့တဲ့ “အချိန်” ဆိုတဲ့အဖြေကို အခုထက်ထိ ကျွန်မ အမှတ်ရနေမိတယ်။
“ဟင်း….သူလျော်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငါ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်၊ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အချိန်တွေကိုတောင် သူ့ကိုပေးခဲ့တာပဲ။ သူလျော်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” လို့ သူက ပြန်ဖြေရှာတယ်။
နေ့တိုင်း အချိန်တွေကို အလုပ်မှာပဲ မြုပ်နှံထားပြီး အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အရွယ်လွန်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို သူ့အိမ်က စိတ်ပူစပြုလာတယ်။ သူ့အတွက် သင့်တော်မယ့် မိန်းကလေးကို လိုက်ရှာ၊ လိုက်စပ်ပေးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်။ “ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးကို ကြိုက်လဲ၊ ကိုယ်ကြိုက်တာ တစ်ခုခုကို ပြောမှ လူတွေက နင့်အတွက် ရှာပေးရ အဆင်ပြေမှာပေါ့” လို့ သူ့ကို ကျွန်မမေးတော့…
သွားအတူ၊ လာအတူ၊ စားအတူ၊ အတူဆွေးနွေးတယ်၊ အတူဆိုညည်းတယ်၊ အတူကဗျာစပ်ကြတယ်၊ အတူကာရံတွေညှိကြတယ်… အတူ….. အတူ…. တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ “အပျော်”ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။
ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်နေ၊ ခံစားနေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ လေးစားမြတ်နိုးနေပါစေ… အဲဒီအချစ်၊ မြတ်နိုးမှုတွေက ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ အနားမှာနေခွင့်ရတဲ့ “အချိန်” နဲ့ မနှိုင်းသာပါဘူး။
သူငယ်ချင်းဂါဂါအာ(ဒေါက်တာမောင်မောင်ကျော်) ရဲ့ အကောင်းဆုံးဘာသာပြန်လက်ဆောင်ပါ။
ဥပမာ၅ နှစ်အရွယ်ကလေးကိုအချိန်အကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်သလို
အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကို ပေးသူနဲ့ ယူသူ နှစ်ယောက်အကြား
တစ်ခါတစ်လေ တစ်ယောက်ယောက်အတွက် အဖိုးမတန်ပေမဲ့
တီချာထင်တာကတော့ အလိုအပ်ဆုံးအရာ ဟာ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါပဲ။
ဟုတ်ပါတယ် တီချယ် အလိုအပ်ဆုံးဟာ အဖိုးတန်ဆုံး လက်ဆောင်ပါ။